Forex na-agbasa Gịnị Bụ Ha? Febụwarị 2021 Ntuziaka maka mgbasa ozi na-agbasa
Gịnị na-agbasa na Forex? Otu esi achota ntuziaka di ala nke 2021
Mgbasa Forex na-agbasa, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-azụghị otu ụzọ ọhụụ, ọ ga-abụ na ị nụla banyere 'mgbasa'. Na ụdị ya kachasị mkpa, mgbasa bụ ọdịiche dị n'etiti 'ịzụta' na 'ere' ọnụahịa nke ụzọ mbuo.
Mgbasa ahụ metụtara ego ị na-akwụghị ụgwọ na-akwụ ụgwọ maka azụmaahịa, ọ bụkwa otu esi enweta ego na-eweta ego n'ịntanetị. Dika onu ogugu nke 'pips', ka o na agbasawanye, o bara uru karia ka i ahia.
Fancy achọta ihe banyere mgbasa dị na otu o si arụ ọrụ? Jide n'aka ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị Gịnị na-agbasa na Forex?
Mara: Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-enye mgbasa na-agbasa oke na ụzọ abụọ ha, ị ka ga-enyocha ihe ọrụ ahụ ruru. Ọ dị mma na ọfụma site na iji onye na-agbasa mgbasa ozi dị ala, mana ọ na-egbochi nghọta ma ọ bụrụ na ị na-akwụ nnukwu ọrụ.
Na nkenke, na mgbasa bụ ihe dị iche na ọnụahịa 'zụrụ' nke ụzọ ebu ụzọ, yana nke nke theell '. Nke a na-eme ka o doo anya na onye na-ere ahịa azụmaahịa na ajụjụ na-enweta uru ọ bụla - n'agbanyeghị otu ụzọ ahịa si aga.
Mgbasa ahụ bụ okwu dị mkpa na ụwa nke Forex, ọ bụghị obere n'ihi na ọ ga-ekpebi ego ole ị na-akwụ iji zụọ ahịa. N'aka ozo, ka odi elu igbasa, otua ka i na adighizi ugwo ugwo.
Tupu anyị enyochapụta etu esi agbasa mgbasa na 'pips', ka anyị leba anya na ihe atụ bụ isi iji kpochapụ alụlụ ahụ.
Na-azụ ahịa USD / CAD
Gị ore ahia na-ehota a 'Buy' price nke 1.31
Ọnụ 'ree' bụ 1.30
Nke a pụtara na ọdịiche dị n'etiti ịzụta na ire ere bụ 0.76%
Dịka ọ dị n'elu, ọ bụrụ na ị ga - etinye iwu ịzụta na USD / CAD - nke pụtara na ị nwere ntụkwasị obi na ụzọ abụọ na - abawanye na ọnụahịa, ị ga - akwụ ụgwọ 1.31. Ozugbo enyere iwu, ị ga-acha uhie uhie site na 0.76%.
N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ihi na ọ bụrụ na ịchọrọ ire ọkwá gị, ị ga-eme ya na 1.30. Dịka nke a pere mpe karịa ihe ị kwụrụ, mgbasa ahụ na-etinye gị na ọghọm ozigbo ozugbo ị nyere iwu. Nke a bụ ya mere o ji dị oke mkpa ịhọrọ ala Forex na-agbasa azụmaahịa Forex.
Gịnị bụ Pips na Forex?
Tupu anyị amara nke ọma ihe mgbasa ahụ bụ na otu esi agbakọ ya, anyị kwesịrị ibu ụzọ mụta maka 'pips'. Ihe kpatara nke a bụ na iji chọpụta obosara nke mgbasa, anyị mkpa inwe ike ịkọwapụta mmegharị ọnụahịa na pipụ.
Nke mbụ, mgbe anyị na-azụ ahịa Forex na ntanetị, anyị na-eme ya iji nweta uru nke mmegharị ọnụahịa pere mpe. Dị ka ndị dị otú a, ọtụtụ ụzọ abụọ ga-enwe ọnụọgụ anọ mgbe ọnụọgụ ntụpọ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịkwụ ụgwọ GBP / USD na 1.3103. Otu n'ime ihe dịpụrụ iche na iwu a bụ USD / JPY, nke na-aga na mkpụrụ abụọ mgbe ọnụọgụ.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na GBP / USD si na 1.310 pụọ3 ka 1.3104, nke a ga - egosi ngagharị nke 0.0001 USD. Na ụwa nke okwu bekee, a ga-akpọ nke a '1 pip'. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ọnụahịa GBP / USD si na 1.31 lọ03 ka 1.3098, nke a ga - abụ mmegharị nke '5 pips'.
Na-achọpụta okwu na Pips
Ya mere ugbu a na ịmara ihe mgbasa bụ, yana otu esi eme pips na-agụta, anyị nwere ike ugbu a na-egosi gị ezigbo-ụwa ihe atụ nke mgbasa.
Ihe nlele nke Pips: Mgbasa nke EUR / USD
Ka anyị kwuo na ịchọrọ ịzụ EUR / USD, ma ị na-achọ ịga ogologo. Dị ka ndị dị otú a, ị kwenyere na EUR ga-aka karịa USD, nke pụtara na ọnụego mgbanwe ga-arị elu.
Ọnụ 'Buy' bụ 1.1389
Ọnụ 'ree' bụ 1.1382
Site na ọdịiche nke ọnụọgụ 7, mgbasa ahụ bụ 7 pips
Place na-etinye iwu ịzụta na 1.1389, nke pụtara na ịchọrọ ego nke EUR / USD iji mụbaa ma ọ dịkarịa ala 7 pips naanị iji mebie
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, n'agbanyeghị na ọnụahịa ịzụta bụ 1.1389, ị ga-achọ ọnụahịa ire ere ka ọ bawanye na 1.1389 tupu ị daa. Tupu ọ rute ọnụahịa a, ị ga-apụ ahịa gị na ọnụahịa dị ala karịa ihe ị kwụrụ.
Gini banyere Pipettes na Forex?
Na-ebughi n'uche imegharị gị ọbụna n'ihu, ọ dịkwa mkpa ka ị ghọta ihe 'pipettes' bụ. N'ihe yiri nke pips, pipettes na-emetụta mmegharị ọnụahịa obere-ọnụ ahịa nke otu ụzọ Forex. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na pips na-adabere na mkpụrụ 4 mgbe ọnụọgụ ntụpọ (2 n'ihe banyere USD / JPY), pipettes na-eji akara 5.
Dịka ọmụmaatụ, kama ịnye ọnụahịa GBP / USD dị ka 1.4592 (4 digits), ọ nwere ike ịdị ka ihe dịka 1.45927 (5 digits). Dị ka nke a, ngagharị nke pipette 1 ga-abụ 0.00001 USD. Gbagwojuru anya? Emela, dị ka ngụkọta oge na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ pips, agbanyeghị, ị na-agbakwunye mgbakwunye nọmba.
Ihe Nlereanya nke Pipettes: Gbasaa nke GBP / USD
N'ihe atụ a, anyị ga-eleba anya otú anyị ga-agbakọ usoro mgbasa na GBP / USD mgbe onye na-ere ahịa na-eji pipettes.
Ọnụ 'Buy' bụ 1.31016
Ọnụ 'ree' bụ 1.31008
Site na ọdịiche nke ọnụọgụ 8, mgbasa ahụ bụ pipettes 8
Place na-etinye iwu ịzụta na 1.31016, nke pụtara na ịchọrọ ego nke GBP / USD iji mụbaa ma ọ dịkarịa ala pipettes 8 naanị iji mebie
N'ihe atụ dị n'elu, Forex na-agbasa GBP / USD bụ pipettes 8. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na onye na-ere ahịa na ajụjụ na-eji sistemụ pipette (ọnụọgụ 5 mgbe ntụpọ ahụ), a na-agbasa mgbasa ahụ na 'pips'. Dị ka ọ dị, mgbasa ahụ ga-abụ, ya mere, 0.8 pips.
Mara: Ọ bụrụ n’inwe ike ịchọta onye na-ere ahịa na-enye pipụ 0.8 na isi ụzọ abụọ, nke a bụ asọmpi. Agbanyeghị, jide n'aka na ịlele ọrụ azụmaahịa ị ga-akwụ ụgwọ!
Kedu Gbasaa M Kwesịrị aimche maka Mgbe Na-ere Forex?
Ọ bụrụ na ị gụọla ntuziaka anyị ruo ebe a, ị ga-enwezi ike ịgbakọ usoro mgbasa ahụ na pips abụọ na pipettes. Echefula, ọbụlagodi na onye na-ere ahịa na-enye nọmba 5 mgbe ọnụọgụ ntụpọ, anyị ka na-agụpụta mgbasa ihu na pips.
Ka o sina dị, anyị ga-enyocha ụdị mgbasa ozi ị kwesịrị ịchọrọ maka mgbe ị na-eji azụmaahịa Forex. Nke mbu, uzo di nkpa ga-ekpebi site na uzo ahia di.
Dịka ọmụmaatụ, isi ụzọ abụọ dịka GBP / USD na EUR / USD ga-enwe oge kachasị sie ike na-agbasa na onye ị họọrọ. Mgbe nke ahụ gasị, ị ga-enwe ụmụntakịrị dịka GBP / NZD, yana ụzọ abụọ dị iche iche dịka USD / NWAA - nke nwere mgbasa kachasị na mbara.
Ihe kpatara nke a bụ liquidity. Ọ bụ ezie na ahịa zuru ụwa ọnụ ga-achọ ọtụtụ ijeri paụnd uru GBP / USD kwa ụbọchị, ndị na-amasị USD / TRY ga-ata ahụhụ site na mmiri mmiri. Kedu ihe na - eme ma ọ bụrụ na ahịa na - ata ahụhụ dị obere? Volatility dị elu. Ka o siri dị, mgbasa nke mbụ na ụzọ abụọ ga-adị oke elu karịa nke ndị isi.
Mgbe ụfọdụ, a ọnụ ọgụgụ nke Broka ga-enye a mgbasa nke efu na ya isi ụzọ abụọ. Agbanyeghị, a na-echekarị nke a maka ndị nwere akaụntụ azụmaahịa ọkachamara. Ọzọkwa, efu Forex na-agbasa Forex Forex ga-abụ na ị ga-enye nke a n'oge awa ahia naanị.
M Kwesịrị Considertụle Ihe Ndị Ọzọ Na-abụghị Gbasaa?
Dị ka mgbasa dị mkpa dị na ụwa nke azụmaahịa azụmaahịa, nke a ekwesịghị ịbụ isi ihe kpatara ịbanye onye na-ere ahịa ọhụụ. N'aka ozo, ikwesiri ileba anya na otutu mgbanwe ndi ozo. Nke a gụnyere iwu, ọnụ ọgụgụ ngwa ndị ị nwere ike ịzụ ahịa, yana ụdị usoro ịkwụ ụgwọ ọ na-akwado.
Agbanyeghị, n'ihe banyere ịkwụ ụgwọ gị na opekata mpe, mgbasa dị ala anaghị adịkarịrị ọnụ ahịa azụmaahịa dị oke ọnụ. Ọ bụ ezie na onye na-ere ahia nwere ike inye ụfọdụ n'ime mgbasa dị ala karịa na ahịa, ọ nwere ike ịme maka nke a na mpaghara ndị ọzọ - dịka ọrụ, ịkwụ ụgwọ ego, ma ọ bụ ego abalị.
Nke a bụ ihe ịchọrọ ilebara anya.
Imirikiti ndị na-ere ahịa azụmaahịa ga-akwụ ụgwọ ọrụ azụmaahịa ụfọdụ. Nke a na-abụkarị obere pasent nke ego ị na-azụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ọrụ nke 0.3%, yana uru ahịa gị bụ £ 2,000, mgbe ahụ ị ga-akwụ £ 6 ụgwọ. Ọ na-adịkarị mkpa ịkwụ ụgwọ ọrụ na nsọtụ abụọ nke usoro ahụ.
Pos Nkwụnye ego na iwepụ ego
Ọ dị mma mgbe niile ị nwere ike ịchekwa ego na mgbasa. Agbanyeghị, ọ nweghị ihe dị njọ karịa ịhọrọ onye na-ere ahịa na-agbasa ala, naanị ịchọpụta na a ga-ebo gị ebubo ime nkwụnye ego na iwepụ. Dị ka ndị dị otú a, lelee ma usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ na-abịa na ego azụmahịa.
Y’oburu n’achọ igha ahia na ntinye ego, ikwesiri ima uche n’ego ugwo n’abali. Nke a bụ ụgwọ ịgbaziri ego n'aka onye na-ere ahịa, a na-ebo ya ebubo maka oge 24 ọ bụla na ị ga-emeghe ọnọdụ ahụ. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịkwụ ụgwọ na-agbasawanye na onye na-ere ahịa, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka nke a mgbe ị na-etinye ego.
Best Low mgbasa Forex Broka 2021
Yabụ ugbu a ị nwere nghọta siri ike banyere ihe mgbasa ahụ bụ, yana otu ọ ga-esi nwee mmetụta kpọmkwem na ike gị ịme uru na ogologo oge, anyị ga - edepụta ihe kachasị elu 3 Forex forex.
Ndị a Broka na-enye ụfọdụ mgbasa kachasị dị ala na oghere ahịa UK. Na na-ekwu, dị nnọọ ijide n'aka na ị na-eme ọzọ nnyocha na ore ahia tupu ịbanye.
Na nchịkọta, ọ bụrụ na ị gụọla ntuziaka anyị niile, ị kwesịrị inwe ezigbo nghọta banyere ihe mgbasa ahụ bụ, otu ị ga-esi gbakọọ ya, yana ihe kpatara o ji dị mkpa ịrapara na ndị na-ere ahịa na-agbasa mgbasa 'siri ike'. N'ikwu nke a, ị gaghị ahọrọ onye na-ere ahịa ọhụụ ọhụụ na nha mgbasa.
Kama nke ahụ, onye na-ere ahia nwere ike ịgba gị ụgwọ na mpaghara ndị ọzọ nke ikpo okwu. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike ịgụnye commlọrụ, ịkwụ ụgwọ ego abalị, yana ọbụlagodi nkwụnye ego / iwepụ. Dị ka ndị dị otú a, na-eme nyocha nyocha mgbe niile na onye na-ere ahịa tupu ịbanye.